Dhizaini yakasarudzika uye kunyaradza kwemubhedha wakasimudzwa - Fenicha - kurudziro
Dhizaini yakasarudzika uye kunyaradza kwemubhedha wakasimudzwa
2 Kurume, 2019 Kukadzi 16, 2021 arun Yakasimudzwa mibhedha miviri, Dzimba dzekurara dzemazuva ano, Mabhedha, Chivako
Mibhedha yakasimudzwa haisi chinhu chekare. Ivo vachiri vakakurumbira kwazvo. Iwe uchazoona nei izvi zviri izvo uye zvaunofanira kufunga nezvazvo kana iwe ukafunga kuzvitenga mune inotevera chinyorwa.
Upholstery inogadziriswa mumafashoni mafashoni ekugadzirwa kwemukati. Izvi zvinoshandawo kumibhedha iri mubhedhuru. Yakasimudzwa mibhedha miviri inopa imba yekurara chitarisiko chinoyevedza. Iyo yese mibhedha kana chete iyo bhodhi yepamusoro inogona kukwidziridzwa. Iwo ekutanga magadzirirwo eheadboard anomira kunze mukamuri dzese. Unogona kusarudza kubva pamhando dzakasiyana. Iwe unogona kusarudza yakakwenenzverwa mibhedha miviri ine yakasarudzika yepamusoro bhodhi yepamusoro uye yekushongedza yekumonera. Kana pahuma yepasi nepatani yakapusa. Zvinoenderana nekuravira kwako uye nemidziyo yemukamuri. Iwe zvakare uchakoshesa rinoshanda basa reiyo yakasimudzwa huma. Kunyanya kana iwe uchida kuverenga uri pamubhedha.
Paunenge uchitenga, ita shuwa yemhando yemachira ekumusoro anoshandiswa. Ivo havafanirwe kungova vanofadza chete pakubata, asiwo neabrasion inodzivirira. Kubatsira ndiko mukana wekuchenesa nyore. Iko kusimba kwechimiro kwakakoshawo. Chinhu chakakodzera kwazvo huni. Yakasimudzwa mibhedha miviri neyakagadzirwa nemapuranga ine hupenyu hwakareba hwebasa. Ivo vakasimba uye vakagadzikana. Kukanganisa kwavo kunogona kuve mutengo wakakwira. Yakasimudzwa mibhedha miviri ine solid laminated chipboard kuvaka zvakare sarudzo yakanaka. Iko kusagadzikana kwehupenyu hupfupi hwebasa hunogadziriswa nemutengo wavo wakaderera.
Models, mavara uye mapatani
Paunenge uchitenga mubhedha wakasimudzwa, une sarudzo yemamodeli mazhinji. Izvo zvakasiyana muhukuru hwemubhedha, mhando yehuni inoshandiswa uye dhizaini. Izvo zvinosiyanawo munzira dzekupfeka. Paunenge uchitenga, unogona kusarudza mubatanidzwa wemasimba akasimba. Mubhedha wakadai unozove iwo wakakurisa chidimbu, unozo tarisa hutungamiriri hwezvimwe zvekushandisa zvemukamuri. Iwe unogona zvakare kubheja pane zviri nyore. Yakakwenenzverwa mibhedha miviri pamwe nekubatanidzwa kweasingaoneki matoni toni kunopa imba yekurara nzvimbo yakawanda yezvakasiyana zvishongedzo.
Iwe uchawana yakasarudzika mhando yemhando mbiri mibhedha kumutengesi HERE.
mbiri mubhedha inotengesa zvakanyanya mibhedha miviri mibhedha yepamusoro
Inimitable rattan fenicha